Methenolone Enanthate အမှုန့်ကိုဝယ်: သင်ကဤသိကြရှေ့မှာမဝယ်ကြဘူး !!! | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/Methenolone Enanthate/Methenolone Enanthate အမှုန့်ကိုဝယ်: သင်ကဤသိကြရှေ့မှာမဝယ်ကြဘူး !!!
အပေါ် Posted 01 / 31 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် Methenolone Enanthate.
Methenolone Enanthate ကဘာလဲ?
Methenolone enanthate, aslo Primobolan Depot အဖြစ်ကိုသိသည် Steroid တစ်မျိုး၏ထိုးဆေးဗားရှင်း Primobolan.is Methenolone။ ဒါဟာတဦးရဲ့ အထိရောက်ဆုံးဟို steroids အနက် ကာယဗလဟိုအန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးအကောင်းဆုံးအနိမ့်အန်ဒရိုဂျင်ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းရှည်-သရုပ်ဆောင်ဟိုအဖြစ်ဖော်ပြနေသည်သည့်။
Primobolan လေ့နိမ့်ဆုံးမှအီစရိုဂျင်နှင့်အန်ဒရိုဂျင်ဆက်စပ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့သည်အသုံးပြုသည်။ Primobolan ကိုလည်းတင်းကျပ် Pre-content တွေကို Diet အောက်မှာကြွက်သားတစ်သျှူးတည်မြဲအကောင်းဆုံးတော်ပါတယ်ဖြစ်ရသောယင်း၏ပျော့ဟိုဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်သံသရာဖြတ်တောက်များအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံအရေပြားအောက်ဆုံးအရည်ကိုလည်း non-aromatising Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့် primobolan ရန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းလည်းခြုံငုံအီစရိုဂျင်နှင့်အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှဖြည့်စွက်အသေးအဖွဲနေတုန်းသံသရာ၏ဟိုသဘောသဘာဝအရှိန်မြင့်ဖို့ bulking သံသရာမှဆက်ပြောသည်နိုငျသညျ။ Methenolone enanthate နှင့်ဆက်စပ်အကြီးမားဆုံးအားသာချက်တစ်ခုမှာဒီ Steroid တစ်မျိုးကအခြား DHT-ဆင်းသက်လာ steroids တူသောအီစထိုဂျင်မှပြောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။ ဒီ Steroid တစ်မျိုး၏အသုံးပြုမှုကိုလည်းမွှေးကြိုင်နှင့်အတူဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဒါဟာအားကစားသမားမြားနှငျ့ကာယဗလဆံပင်, အဆီပြန်အသားအရေ, ဝက်ခြံ, gynecomastia နှင့်ဖောင်း၏ဆုံးရှုံးမှုများကဲ့သို့ Steroid တစ်မျိုးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုရင်ဆိုင်ရရန်မလိုပါကြောင်းဆိုလိုသည်။
Methenolone Enanthate အမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ?
Methenolone enanthate Powder Methenolone enanthate များ၏ကုန်ကြမ်း ia အများစုကုမ္ပဏီမှကြိုက်တတ်တဲ့ အွန်လိုင်း Methenolone enanthate Powder ဝယ်ဖို့အထူးသဖြင့် မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် အများအပြားဖောက်သည် Methenolone enanthate drugs.According စေရန် Methenolone enanthate Powder, AAS ကုန်ကြမ်းကုမ္ပဏီအတွက် primo အီး၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဤမျှလောက်များစွာသောလူများထံမှ Methenolone enanthate Powder ကိုဝယ်အဘယ်ကြောင့်ကြောင်းဖွင့်, 98% ဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်, AAS.
Methenolone enanthate Powder အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:
အမည်: Methenolone Enanthate အမှုန့် / primo E ကို
ပေါ်လာ: အဖြူရောင်သို့မဟုတ်ပိတ်, အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အလင်းအဝါရောင်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့်
စတင်ခြင်းအချိန်: 20 minites
Methenolone Enanthate အမှုန့်အကျိုးခံစားခွင့်
အများဆုံးအပြင်းထန်ဆုံးဟိုစတီရွိုက်၏တစ်ဦးအဖြစ်ကုန်ကြမ်း Methenolone Enanthate, ကာယဗလများအတွက်ထိရောက်သောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်: ကြွက်သားရရှိမှု; အဆီဆုံးရှုံးမှု; အမြန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း, ဒါပေါ်မှာ ... Primobolan တစ် DHT-ဆင်းသက်လာဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်း၏မိဘဟော်မုန်း၏တူညီသောဂုဏ်သတ္တိများများစွာကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ယင်း၏မဆိုထိုးမှာအီစထိုဂျင်သို့ aromatase အင်ဇိုင်းများက aromatized မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရန်ရှာဖွေနေမဆိုတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးတည်းကသုံးပြီးထံမှမဆိုအီစရိုဂျင်နှင့်ဆက်စပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။ ရေ retention ကိုနှင့်ဖောင်း, (ရေ retention ကို၏ရလဒ်ကဲ့သို့) မွငျ့မားသောသွေးပေါင်ချိန်, ဖြစ်နိုင်သမျှအဆီအမြတ် / retention ကိုနှင့် gynecomastia: ဒီကလုံးဝကိုအောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမဆိုဘို့အလားအလာရှောင်ဆိုလိုသည်။ ဟို steroids သည့်ကောင်များကို aromatizable သော puffy နှင့်ပျော့ပျောင်းကြည့်ခြင်းမရှိဘဲ, Primobolan Pre-ပြိုင်ပွဲသံသရာနှင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ဖြတ်တောက်အဆင့်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့်ပိုမိုနှစ်သက် '' ဖြတ်တောက် 'ဝင်းအဖြစ်ကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများအများစုအားဖြင့်မှတ်ယူသည်။
သငျသညျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆင်းရဲသားကိုဟိုတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ testosterone ထက်ခွန်အား၌ကနိမ့်အောင်, ထိုအာရုံကိုရန်လိုအပ်ပါတယ် Aslo, Primobolan အားကစားသမားသို့မဟုတ်ကာယဗလသံသရာ bulking အဘို့, ပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သံသရာ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်တိုင်းတာအစွမ်းသတ္တိကိုအမြတ်အဘို့အများကပိုမိုနှစ်သက်သည်မဟုတ်။ Primo လည်းအကောင်းဆုံးအဖြစ်ကောင်းစွာ (နဲ့အတူ stacked) အခြားဟိုစတီရွိုက်နဲ့ပေါင်းစပ်နေတဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာတစ်ခုသို့မဟုတ် bulk သို့မဟုတ်ပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သံသရာထိုသို့အသုံးချဖို့ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ solitarily ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ် Primobolan ၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးအနီးအချည်းနှီးအလေ့အကျင့်အဖြစ်အများအပြားအားဖြင့်မှတ်ယူ, ဤတူညီသောလိုင်းများတလျှောက်တွင်များစွာသောဟို Steroid တစ်မျိုးသည်အသုံးပြုသူများ၏မြင့်ကုန်ကျစရိတ်စဉ်းစားအလွန်လက်တွေ့ကျမကျမည်အကြောင်းအရာ, Primo အလွန်မြင့်မားဆေးများမှာသာအသုံးဝင်ကြောင်းဆိုကြသည်ဖြစ်ပါတယ် ဒီဟို steroid တစ်မျိုး။ ဤသည်ဟောဒီမှာသတင်းအချက်အလက်များထပ်မံဒီပရိုဖိုင်း၏ဆေးများအပိုင်းများတွင်တိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်။
Methenolone Enanthate အမှုန့်အုပ်ချုပ်ရေး
ကာယဗလ, အားကစားသမားများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်သက်ဆိုင်ရာတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာရှိသည်ထိုးဆေးပုံစံများအတွက်အစပြုသူ Primobolan ဆေးညွှန်းပုံမှန်တစ်ပတ်ကိုအကြောင်းကို 400mg မှာစတင်ပါ။ တစ်ပတ်ကို 400mg, လုံလောက်အောင်လုံလောက်သောဖြစ်သင့်သော - အလယ်အလတ် Primobolan ဆေးညွှန်း 700 ၏အကွာအဝေးအတွင်းများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။
အဆင့်မြင့် Users 800 သကဲ့သို့မြင့်မားသောစွဖြစ်နိုင်သည် - တစ်ပတ်ကို 1,000mg ။ တစ်ပတ်ကို 50mg - ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အနည်းငယ်မျှသာ virilization ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အမျိုးသမီး Primobolan ဆေးညွှန်း 100 ၏အကွာအဝေးအတွင်းများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုးဆေး Primo ဦးစားပေးပုံစံဖြစ်သောပါးစပ်မူကွဲထက်အမျိုးသမီးအားဖြင့်ဝေးလျော့နည်းမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိတယ်။
တစ်ဦးကုထုံး setting ကိုခုနှစ်, စံအထီး Primobolan Depot ဆေးများရက်သတ္တပတ်အကွာအဝေးလျင် 100-200mg ကျပါလိမ့်မယ်။ ဆေးဝါးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, Primobolan Depot ဆေးများပုံမှန်တစ်ပတ်ကို 200mg မှာ start နှင့်ထို့နောက်အနည်းငယ်အချိန်လွန်ပြီပြီးနောက် 100mg အပတ်ကမှလျှော့ချပေးပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို 100mg ယေဘုယျအားဖြင့်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုလျောက်ပတ်သောငွေပမာဏကိုဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်တိုင်းနှစ်ပတ်အတွင်း 100mg လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ Primobolan Depot အရိုးပွရောဂါ, sarcopenia နှင့်ရောဂါများသို့မဟုတ်အခြေအနေများဖြုန်းယေဘုယျကြွက်သားကုသအတွက်အလွန်အောင်မြင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Methenolone ဟော်မုန်းကိုလည်း corticosteroids ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့ဆက်ဆံအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် carcinoma နှင့်ပင်အသည်းရောင်အသားဝါဘီကုသထိရောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးစွမ်းဆောင်ရည် setting ကိုခုနှစ်တွင် Primobolan Depot ဆေးများကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အလိုဆန္ဒများပေါ် မူတည်. ကိုအလွန်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို 200-300mg တစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ် Diet အဆင့်စဉ်အတွင်း catabolic ကာကွယ်မှုပေးလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့အဲဒီအစားအနိမ့် Primobolan Depot ဆေးများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်သူတို့ကအရမ်းအရှိဆုံးလူကောင်းကောင်းသည်းခံဖြစ်သင့်သည်။ အများစုမှာလူတို့သညျ 400-500mg တစ်ပတ်ကိုအကွာအဝေးအတွင်း Primobolan Depot ဆေးများ, ပို. ထိရောက်သောဖြစ်စိုင်အခဲရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ဆဲသည်းခံ၏ဘုံအတွင်းကောင်းစွာဖြစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့အများစုယောက်ျားလွယ်ကူစွာဒီ Steroid တစ်မျိုး၏တစ်ပတ်ကို 600mg သည်းခံနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကယောက်ျားတစ်ပတ်ကို 600mg အထက်တွင် Primobolan Depot ဆေးများကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုဆန်းမဟုတ်ပေမယ့်သူတို့က, သိသိသာသာတစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်သဘာဝတရား၏အထူးသဖြင့်သူတို့အားဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်စေမည်။
Methenolone Enanthate အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
ဒါဟာသက်ရောက်မှုဘက်မှကြွလာသောအခါ Primobolan ကအခြားကြမ်းတမ်းဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူသီးနှံများကိုပုံမှတစ်စိတ်ကူး AAS စေသည်ဖြစ်သောအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ ကိုယ့်အားလုံးဟော်မုန်းနှင့်အတူကဲ့သို့အဓိကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကသဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းဖိနှိပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, တစ် post ကိုသံသရာကုထုံးအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောယင်း၏ DHT ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ဆံပင်ကျွတ်ကဲ့သို့သောအခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြသည်။
primo တစ်ကျော်ဂရမ် (1000mgs) တစ်ပါတ်မှာစော်ကားလျှင် ပို. နှစ်ဖက် (ဥပမာကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို strain) ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ primobolan '' အားနည်း '' စဉ်းစားသည်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလေးစားမဖြစ်သင့်ကြောင်းယူဆဖို့မိုက်မဲသည်။ ကသေးအစွမ်းထက် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအကောင်းတစ်ဦးအစီအစဉ်နှင့်အတူမှန်မှန်ကန်ကန် run ရန်လိုအပ်ပါသည်သတိရပါ။
Methenolone Enanthate မူးယစ်ဆေးစျေးနှုန်း
အဆိုပါ Primobolan သုတေသနအရကျနော်တို့ Primobolan စျေးနှုန်းအကြောင်းပိုမိုသိသို့သော်စျေးနှုန်းများယေဘုယျအားဖြင့်အောက်ပါပ္ပံအတွက်ဆင်းသက်။ အဆိုပါစျေးကြီးအဆုံးတွင်, Injection Primobolan $ 200 ကနေအထိနိုင်သည် - မှာ dosed တစ်ခုတည်း 230ml ဖန် ampule များအတွက် $ 10 - ဆေးဝါးထုတ်ကုန် $ 100 သကဲ့သို့မြင့်မားသည်နေချိန်မှာတစ် UGL ထုတ်ကုန်များအတွက် ml ကို 20mg / မှာ dosed ကြောင်း 25ml ဖလားကိုနှုန်း $ 1 100mg / ml ။ အောက်ပိုင်းအဆုံးတွင်, တဦးတည်း $ 90 များအတွက် UGL တန်းထိုးဆေး Primobolan ရှာတှေ့နိုငျ - 130mg / ml မှာ dosed တစ်ခုတည်း 10ml ဖန် ampoule များအတွက် $ 100 - 12mg / ml မှာ dosed 18ml ဖလားကိုနှင့်ဆေးဝါးထုတ်ကုန်နှုန်း $ 1 $ 100 နိုင်ပါတယ်။
Primobolan မူးယစ်ဆေးမှနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ, Primobolan အမှုန့် AAS အတွက် Primobolan မှုန့်ဘယ်လောက်ကုန်ကျ-effitient.price ဖြစ်ပါတယ် USD360 / 10g.Wow ဖြစ်ပါသည်, အဘယ်အရာကိုအမြတ်!
အွန်လိုင်း Methenolone Enanthate အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သင်အွန်လိုင်း Methenolone Enanthate အမှုန့်ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာသင်ရောင်းချရန်အနိမ့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သို့မဟုတ်အတု Primobolan ကိုရှာဖွေဘို့, yeah, ထိုအလွယ်တကူ Primobolan powder.It ရဲ့ရဲ့အများဆုံးပေးသွင်းအများဆုံးဆေးဝါးတန်း Primo ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့စျေးကွက်ကနေဆွဲထုတ်ခံခဲ့ရအဖြစ်ဆေးဝါးတန်း Primobolan ရှည်ရှည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြောပါတယ် ပင်နိုင်ငံတကာတွင်။ သို့သော်အမှန်တကယ်က exist.Therefore မြင့်မားသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Primobolan ဝယ်ဖို့မည်သို့ဘို့အကြောင်းကိုရှာဖွေနေသူများ, ဂရုတစိုက်ရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်ပါဘူး။ ထိုအ AAS ဖြစ်နိုင်ခြေပေးပါသည်။
AAS ထံမှ Methenolone Enanthate အမှုန့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
1.Visit AAS က်ဘ်ဆိုက်, သင်လိုချင်တဲ့ထုတ်ကုန်ရွေးကောက်သဖြင့်, AAS wbsite ပေါ်တွင်သင်၏အဆက်အသွယ်နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစွန့်ခွာ, ထို့နောက်တင်ပြရန်, AAS ရဲ့ဖောက်သည်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက်စကားပြော, 12 နာရီ၌သငျ reply Serviceswill တစ်ချိန်ကသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
2.Just ကုန်ပစ္စည်းများထွက်ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း, အသင့်လျော်ပေးချေမှုကိုရှေးခယျြ, အီးမေးလ်ပေးပို့သို့မဟုတ် Abby..then ဟာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်, အရေအတွက်, သင်္ဘော, လိပ်စာနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အတွက်စကားပြော, Demi, အမ်မလီကဲ့သို့ AAS အတွက်အလုပ်လုပ်သူကိုလူတို့အား WhatsApp အပေါ်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ ငွေပေးချေမှုပြီးနောက် 12 နာရီအတွင်း, ငွေပေးချေပြီးနောက်, သင်ကခြေရာခံနံပါတ်ရလာလိမ့်မယ်, ကိုလည်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု AAS သငျသညျအခြိနျမှာ updated စောင့်ရှောက်မည်, ထို့နောက်သင်ရုံသင့်ရဲ့ကှကျကိုမြော်လင့်အငြိမ့်ထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
3.AAS သငျသညျတရုတျနိုငျငံမှာမိတ်ဆွေတစ်ရှိပါကဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက်, သငျသညျလညျး, သင်၏မိတ်ဆွေများကသူတို့ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့နိုင်ပါတယ်အသေးစိတ်အတွက်စကားပြော, သင်ချင်သောကုန်ပစ္စည်းများရတရုတ်ပြည်တွင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့သည်။
Tags: Methenolone Enanthate အမှုန့်
2863 Views စာ
အစုလိုက်အတွက် testosterone Enanthate အမှုန့်ကိုဝယ်	ရောင်းရန် Methenolone Enanthate အမှုန့်: မှန်မှန်ကန်ကန် Primo သုံးစွဲဖို့4အမှုအရာ!